Sezibalo kubalwa amaxabiso bitcoin ngenxa 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 25, 2018 admin
Sezibalo kubalwa amaxabiso bitcoin ngenxa 2018
ngoJanuwari 22, umsebenzisi Medium Joel Lopez Barata lapapasha post: “I kubalwa amaxabiso bitcoin unyaka wonke 2018. Anisayi kukholwa isiphumo! “Nge ukuphika” oku nje uluvo, na ibhunga mali. ” izibalo Lopez kaThixo zisekelwe phezu hypothesis ukuba ukuziphatha bitcoin kwixesha elizayo uya kunxibelelana ngokokuziphatha kwakhe kwixesha elidlulileyo. Kule meko, Lopez iqwalasela bitcoin “imali okunempilo”, no Kwiat – hayi: “Le nzuzo elizayo iya kulingana wokugqibela, ngexesha ukuqonda abantu abaninzi ukuba bitcoin yimali ilungileyo.”
I Lopez Ukulinganisa isekelwe phezu indlela Monte Carlo. Le uluhlu olubanzi ubuchule azo ukuba ukuthembela kwiisampuli random kuphindwa. Kule meko, Lopez isebenzisa ingeniso dollar mihla bitcoin ukuqonda oko ixabiso uqikelelo iya kuba yi ekupheleni 2018.
Ukuze babale ingeniso ngemihla, yena iyahlula ixabiso bitcoin yangoku ngexabiso ngomhla wokugqibela kwaye ususa iyunithi: “Ethetha Monte Carlo Ukulinganisa ezimalini, sicingela ukuba ukuziphatha ixabiso lexesha elizayo asethi liya kufana zalo elidlulileyo, kwaye udale ezininzi iinguqulelo random yale elizayo , nto iyaziwa nemaathematika njengezona “ukuhambahamba random”. Ikhowudi epheleleyo ngokuyila Ukulinganisa loo iyafumaneka kwi GitHub.
Ukuze ukwakha umfuziselo nganye ukuhamba random kwi Ukulinganisa, Kufuneka umntu athathe iisampuli random yenzuzo mihla le 2010 ukuba namhlanje, ungadibanisa uze nande simane de ngoDisemba 31, 2018. Emveni kwalonto, ixabiso langoku bitcoin iyanda yi ixabiso a random yokuhamba, kwaye isiphumo a yokulinganisa ixabiso elizayo. Oku kufuneka kwenziwe amaxesha amaninzi (kule meko – 100,000 amaxesha), yaye ekupheleni konyaka siya kubona unikezelo ixabiso lokugqibela random ukuhamba ngalinye.
Eyokuqala 200 of 100,000 iin- random ikhangeleke ngolu hlobo:
Kubonakala ukuba ixabiso lokugqibela kuninzi random ehamba nemiqulu $ 10,000 ukuba $ 100,000. Lo mzobo ulandelayo ubonisa ukwabiwa amaxabiso lokugqibela yonke 100,000 ukuhambahamba random:
Ibonisa ukuba ixabiso ezinokwenzeka uyahluka $ 24,000 yaye $ 90,000. Ukuze siyiqonde ngakumbi yile, kukho iindlela ezininzi. Ekuqaleni, uyakwazi ukubala nje 50% -percentile th lonikezelo kwamaxabiso zokugqibela. It iya kulingana $ 58,843. Enye indlela kukuba ukubala umsebenzi okuba lexinene usebenzisa loxinano qikelela yenyukliya kwaye ufumane ixabiso ehambelana eliphezulu kwalo msebenzi – $ 55,530.
Kodwa oku kuvezwa wokugqibela, ke kungcono ukuba bayisebenzise ukufumana lokuphumla ukuzithemba. Wentengo bitcoin i, i 80% ithemba lokuphumla iya kuba $ 13,200 – $ 271,277. Walatha kwakhona ukuba amathuba ukuba ekupheleni konyaka ixabiso kuya kuba ngaphantsi $ 13,200 ziyafana amathuba ukuba woba phezulu $ 271,277.
Ke kaloku, ukuba mninzi qikelela enyukliya yaziwa, kunokwenzeka ukuba ukubala amathuba ukuba iindleko bitcoin ziya kuwa ekupheleni isalamane ngonyaka kophawu ethile. Ukuthi ngqo, amathuba ukuba ixabiso iya kuba ngumsebenzi okanye bulingane kwinqanaba January 20 ($ 12,000), i 9.84%.
Ngubani owenza igalelo elikhulu kwishishini crypto? Top 7
Phantse elishumi kwiminyaka eyadlulayo ...
Ukuthembeka ukuqalisa ...
Post Previous:An kuhlaselwa Abaxhobileyo komthetho Canadian Crypto Exchange
Post Next:Blockchain News 26 EyoMqungu 2018